एजेन्सी, पछिल्लो केहि दिनयता मुम्बईमा गोल्ड अवार्ड २०१८ आयोजना गरिएको थियो। अवार्ड कार्यक्रममा धेरै अभिनेत्रीहरुले आफ्नो फेसनबाट सबैलाई मोहित बनाए। सबै अभिनेत्रीहरु निकै बोल्ड र ग्ल्यामरस अवतारमा उपस्थित भएका थिए। यस इभेन्टमा दिव्यांका त्रिपाठी पनि नयाँ हेयरस्टाइलको साथ उपस्थित भएकी थिइन्। यतिबेला उनको हेयरस्टाइलको तस्विर सामाजिक संजालमा निकै भाइरल भैरहेको छ।
दिव्यांका त्रिपाठी अवार्ड समारोहमा गुलाबी अफ-शोल्डर गाउनमा निकै सुन्दरी देखिएकी थिइन्। उनको हेयरस्टाइललाई मानिसहरुले निकै मन पराएका छन्। दिव्यांकाले आफ्नो इन्स्टाग्राममा स्टाइलिश हेयरको तस्विर सेयर गरेकी छिन्। अभिनेत्री दिव्यांकाको कपाल गुलाबको फुल जस्तै देखिएको छ। दिव्यांकालाई एकता कपुरको चर्चित सिरियल ‘ये है मोहब्बतें’ मा ‘इशिता’ को भूमिकामा देख्न सकिन्छ। सिरियलमा उनको अपोजिटमा करण पटेल रहेका छन्। सिरियलका यी जोडीलाई दर्शकहरुले निकै मन पराउछन्।
प्रकाशित : शनिबार, असार ०९, २०७५१२:१५
बिहे भोजमा मासु खाने क्रममा घाँटीमा हाड अड्किएर कोइरालाको मृत्यु !
अझै रोकिएन सुन तस्करी: तीन किलो सुनसहित नागढुंगाबाट २ जना पक्राउ !
डर,धम्की देखाएर ७१ वर्षीया वृद्धामाथि पटक-पटक बलात्कार !
बुबाको शव देखेर मानसिक सन्तुलन गुमाएपछि साङ्लोमा बाँधिन बाध्य एक युवा !
ट्रक खोलामा दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु!दुई जनाको अवस्था भने गम्भीर!
एमाले-माअाेवादी कार्यक्रममा विवादः हटाइयाे ब्यानर
काङ्ग्रेसभित्र गुटउपगुट अन्त्य भयो : विमलेन्द्र निधि